Video: Thet Mon Myint Meet With Her Fans @ Thamada Cinema | Myanmar Celebrity Gossip & News
Video: Thet Mon Myint Meet With Her Fans @ Thamada Cinema
Myanmar Popular Actress Thet Mon Myint met with her fans at Thamada Cinema on 1 July 2011, the first day of “Adam, Eve and Datsa” Film Screening. This film is directed by Director Wine and Myanmar popular actors; Pyay Ti Oo, Sai Sai Kham Hlaing and Thet Mon Myint star as the main characters. “Adam, Eve and Datsa” is being shown on cinemas in Yangon and Mandalay starting from 1st July.
သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပရိသတ်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ သက်မွန်မြင့်
Htet HtetJuly 2, 2011 at 3:22 AMအပြစ်ကင်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ သက်မွန်မြင့်ကချစ်စရာလေး သရုပ်ဆောင်တာအရမ်းကြိုက်တယ်ReplyDeleteyinyinJuly 2, 2011 at 7:23 AMမြန်မာ မင်းသမီးတွေ အားလုံးထဲ မှာ သက်မွန်မြင့် က်ိုအကြိုက်ဆုံးဘဲ။အရမ်းကြီးလဲ မကလက်ဖူး။ဇာတ်ရုပ်နဲ့လိုက်အောင်လဲ ၀တ်တတ် တယ်။ချစ်ဖို့လဲ အရမ်းကောင်းတယ်။ReplyDeletethanzinJuly 2, 2011 at 11:44 AMshe is amazing actress! I love her .ReplyDeleteshunJuly 2, 2011 at 12:08 PMချစ်စရာလေးသဘောလဲကောင်းတယ်ဟန်လဲမရှိဘူးlove u so much thet monReplyDeleteuss4July 2, 2011 at 11:29 PMသက်မွန်မြင့်..ငါ့များမကြိုက်ဘူးလားမသိဘူး...သူအမေသွားပြောအုန်းမှ..ဟီး..ဟီး..ချစ်လို့စတာ..ReplyDeleteUnknownJuly 3, 2011 at 2:30 AMThet mon you looks so beautiful.i love you so much.ReplyDeletepaukeJuly 3, 2011 at 11:44 AMအဟီး ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်တယ်....ReplyDeleteTUANGPIJuly 3, 2011 at 11:28 PMI don't like she isasuck woman........ReplyDeleteTUANGPIJuly 3, 2011 at 11:29 PMBut i love her........ReplyDeleteမုန်းချစ်သူJuly 3, 2011 at 11:44 PMအ၇မ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးပါ...တကယ်ကို ချစ်စရာကောင်းတယ်...အမြဲအားပေးနေတယ် သက်မွန်ရေ... အကယ်ဒမီဆုကြီး အမြန်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်ReplyDeletekuroroJuly 5, 2011 at 11:07 AMすごく可愛い。ア・イ・シ・テ・ルよ。ReplyDeletechilliJuly 11, 2011 at 1:11 AMi wish for u to be healthy and happy............ReplyDeleteroseJuly 15, 2011 at 4:38 AMhe is charter i like and he is so cute,ReplyDeleteko gyi kaunnJuly 15, 2011 at 4:49 AMလက်ရှိမင်းသမီးထဲမှာတော့ ဝတ်စားတာ အယဉ်ကျေးဆုံးပဲလို့ထင်တယ်။ ဆက်ထိမ်းသိမ်းထားပါ ဒီအပြုအမှုကောင်းလေးကို လို့ တိုက်တွန်းပါတယ် ညီမလေး....ReplyDeleteWelcomeJuly 15, 2011 at 3:26 PMI like her but I don't like anymore since she changed her religion's belief...ReplyDeletetititooJuly 20, 2011 at 9:00 AMshe is the most beautiful girl among the myanmar actressesReplyDeleteZizawarsNovember 17, 2011 at 9:15 PMငါသိပ်ကံကောင်းတာပဲ။ သက်မွန်မြင့်လို့ချစ်လို့အလွန်ကောင်းတဲ့သူနဲ့ တခေတ်တခါတည်းလူဖြစ်ခဲ့ရလို့၊ နောက်ကျပြီးမှငါမွေးခဲ့ရင်အဲဒီလောက်ချစ် စရာကောင်းတဲ့သူငါတွေ့ဆုံကြုံခွင့်ရပါ့မလားReplyDeletehtaynaiwinFebruary 17, 2012 at 3:21 AMi whish for you, everything good luck and alway good healthyReplyDeletehtaynaiwinFebruary 17, 2012 at 3:22 AMi whish, everything goodluck and alway good healthReplyDeletesammiMarch 18, 2012 at 2:04 AMi will alway be ur best fan try ur best. good luck.ReplyDeletexinxinApril 11, 2012 at 9:15 AMမသက်မွန်ကိုအ၇မ်းကြိုက်တယ်....သရုပ်ဆောင်တာေ၇ာ..၀တ်တာေ၇ာချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်...ဒီလိုလေးဆက်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်၇င်တကယ့်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းပြီ...ReplyDeletesan min naingApril 22, 2012 at 2:58 AMသက်မွန်မင်းကိုတော့ လေးစားနေတဲ့အသံလေးဆက်လက်ကြားပါရစေ......ReplyDeleteCoffeAugust 3, 2012 at 11:29 PMပြုံးတာလေးတွေ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတရ်.....ဆက်လက်အောင်မြင်ပါစေလို့.....ReplyDeletesteven awngAugust 5, 2012 at 1:22 PMမမသက်မွန်မြင့် သမီးထဲမှာတော့ အလှမင်းသမီးဘဲဗျ.....သက်မွန်မြင့် က်ိုအကြိုက်ဆုံးဘဲ...ဗျ....ok ok မမသက်မွန်မြင့် ဟ..ဟဟ...ဟ..။ReplyDeleteAdd commentLoad more...